I-Raw Testosterone i-Acetate powder (1045-69-8) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Testosterone I-acetate powder
SKU: 1045-69-8. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya komlinganiselo we-Testosterone Acetate powder (1045-69-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Testosterone ye-Acetate powder ividiyo
I. I-Testosterone I-acetate powder BCharacters:
igama: I-Testosterone i-Acetate powder
I-molecular Formula: C22H30O4
Isisindo somzimba: 358.4712
Melt Point: 228-230 ° C
Umjikelezo we-Acetate powder
Amagama eKhemikhali: I-Testosterone i-Acetate powder, i-Test ace ace powder (i-CAS 1045-69-8)
I-Testosterone I-Acetate powder Usetyenziso
I-Testosterone I-acetate powder yi-androgenic steroid eneempembelelo ze-anabolic. Uninzi unyango lwe-acetate luhambisa amayeza kumzimba ngokukhawuleza. I-Testosterone i-Acetate powder inomngcipheko ophantsi kakhulu wokugcina amanzi. Abantu abasebenzisa le fom yeTestosterone banokuthi banokuthi bangenabuhlungu buhlobo lwe Testosterone.
I-Testosterone i-Acetate powder ester isebenza ngokukhawuleza, kwaye ngoko ke idinga ixesha eliqhelekileyo ukwenzela ukuba kugcinwe amanqanaba egazi ngokuzinzile. Inzuzo kulokhu kunjalo kukuba i-steroid ingasuswa emzimbeni ngokukhawuleza emva kokusetyenziswa kuphelile, ngaloo ndlela yenza kube yinto ekhethekileyo yokukhetha abadlali abavavanywe. Abadlali bebhola basebenzisa i-Testosterone i-Acetate powder ukuze bafumane inzuzo ephawulekayo ngobukhulu bemisipha kunye namandla, kunye nomqondo jikelele wokuphila kakuhle nokwandisa i-libido kunye ne-drive drive.
Iyiphi imilinganiselo ye-Testosterone Acetate powder
I-Testosterone i-Acetate powder (i-CAS 1045-69-8) yi-Androgen, eqhelekileyo isetyenziselwa ukwakha umzimba, ukugcina umzimba nokukhuthaza ukuphuhliswa kwamalungu omzimba kunye nezitho zesini.
Kubantu, i-dosageis ephakanyisiweyo ye-250-1000 mg ngeveki, kwaye ayikhuthazwa ukuba asebenzise abafazi. Umjikelo unokugqibela kwiiveki ze-8-12. Ezi ziko zanele ukufikelela kwiziphumo eziphezulu, zombini amandla kunye nokwanda kwamanani.
Ukuba unesigama kunye nesiqingatha sokuvavanya njengomcwangcisi womzimba okhuphisanayo, uya kuhlala unamazinga aphakamileyo ovavanyo lwegazi. Kodwa ke, loo nto ayinempilo. Kule nkqubela yezempilo, amanqanaba amaninzi aphantsi akhethwe. Umjikelo okhuselekileyo uza kuba ne-4-500 mgs yokuvavanya ngeveki. I-dose ye-HRT yovavanyo iphantsi kwe-250 mgs iveki. Gcinani engqondweni, uhlala kwi-HRT phantse unyaka wonke, kwaye ke kutheni uqhuma uhlale kwi-250 okanye ngezantsi. Uvavanyo lwe-ace ace powder likunika ixesha elifutshane xa ufuna.
I-Testosterone i-Acetate powder isebenza njani
I-Testosterone i-Acetate powder iyinyukliya ye-steroid lipid. I-Testosterone i-Acetate powder isebenza ngokufaka endaweni ye testosterone ukuba umzimba ulahlekile. I-Testosterone i-Acetate powder ifanele isetyenziswe kuphela ukuba i-testosterone iswelekile iye yaqinisekiswa yimpawu kunye nokuhlolwa kwegazi. I-testosterone yi-hormone yesilisa, ibekwa njenge-androgen okanye i-endocrine ye-metrolic agent, kwaye ixanduva lokuphuhlisa impawu zesini zesibini kumadoda kuquka nokuphuhliswa nokugcinwa izitho zesini, ukukhula kweenwele zobuso, ukuphuhliswa kwamathunga kunye nezinye iimpawu. Kwifom yesigunyaziso, isetyenziselwa ukunyanga imiba yeendysterone zamadoda, kubandakanywa amanqanaba aphantsi ase testosterone (hypogonadism). I-Testosterone i-Acetate powder yindlela enye ye-ester. Iifomnsterone ezininzi zifumaneka kwiimarike namhlanje. Abanye banamandla kunabanye, njengeTestosterone acetate powder. I-Testosterone I-Acetate i-powder injections yenye yezona ndlela zithandwa kakhulu kwiindlela ezincinci ze-testosterone okanye i-hypogonadism kubantu abadala.
I-Testosterone i-Acetate powder (i-CAS 1045-69-8) inegama lomnye wezona ndlela ezinamandla kunye ezinamandla zeeriti ze-steroid.
Ezinye iifom ze-steroid ezinokutsha ziza kulungiswa kwe-100 mg nge-milliliter. Ekhutshwe nguGen Sys Biotechnology, ilebula ngokwayo ithi iikhemikhali zenzelwe uphando kuphela.
I-testosterone i-acetate powder ibonisa umngeni kulabo abakwenzayo. Ngokuqhelekileyo, iifutshane i-ester inokwenzeka ukuba kuya kuba nePIP. I-Acetate yethu ibekezeleke / ayibuhlungu. Enye inzuzo yinqanaba lokukhutshwa kwe-Ester iyakulungelelwa kubadlali abavavanywe. Inqaku elibalulekileyo elithathayo kukuba i-Testosterone i-acetate powder iya kubangela ukuba i-Esters ibe yinto enokukhawuleza ngokukhawuleza ukwenzela ukuba ufanele uthathe amanyathelo xa uzama ukulawula iziphumo ezichaphazelekayo ze-estrogen. I-100mg ye-Acetate yomelele ngakumbi kwaye i-Enanthate ukuze ifake i-SERM okanye i-anti-aromatase ngokubambisana ne-Test ace pow powder.
Ayikho imfihlo yokuba iilenki zidume kakhulu phakathi kwabakhi bomzimba, kunye okanye ngaphandle kwemimiselo. Kufuneka kwakhona kuqaphele ukuba ngelixa iiliti ze-steroid zithandwa ngabantu abaqeshwe ngemizimba ekuzuzeni ama-muscle kunye nokuqiniswa kweenjongo, ezi ziphumo zihlala zinyamalalala xa isicatshulwa siphelile. Ezinye izisombululo zincinci malunga nesiqingatha sobomi kunabanye. I-Testosterone Acetate powder-half life ingakhohlisa ukwanda ngokukhawuleza kumanqanaba athatywayo, kodwa loo miphumo igxothwa emva kweentsuku ezimbini ukuya kweyimihla.
Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba nangona iiliti ze-steroid zizuza kwi-earning gain kwaye zomeleza iinjongo kumalungu omzimba, iziphumo zihlala zinyamalale xa isicatshulwa siphelile. Ezinye izisombululo zincinci ngokubhekiselele kwisiqingatha sobomi kunezinye iindlela.I-half-life of Testosterone I-Acetate powder ingakhula ngokukhawuleza, kodwa le miphumo iya kutshabalala emva kweentsuku ze-1-2.
I-Testosterone i-Acetate Powder (i-CAS 1045-69-8)
I-Testosterone i-acetate powder Marketing
Ingaba i-Testosterone i-acetate powder Ingaba nayiphi na imiphumo yangaphandle
I-Testosterone i-acetate powder idume ngenye yezona ndlela ezinamandla kakhulu kunye ezinamandla ze-injection ye-steroid. Umjikelezo we-test ace powdertate umjikelezo unokubangela iziphumo ezingalindelekanga ezinjenge-shrinkage yamathambo, ukulahleka kweenwele, ukulahleka kwe-libido, intloko, ukuxhalaba kunye ezinye, ukuguquka kwemizwelo.Iyona hormone enamandla enokuchaphazela impilo, yengqondo, kunye nempilo yengqondo kunye nokuphila kakuhle. Ngaloo ndlela, kufuneka ihlonishwe kwaye isetyenziswe ngokucophelela. I-Testosterone i-acetate powder yachazwa kuqala kwiminyaka emininzi edlulileyo, xa i-orrogens injectable yaqala ukuphuhliswa. Le steroid yashiya isenzo seklinikhi ngokukhawuleza, kwaye mhlawumbi ngenxa yezizathu ezifanelekileyo. Kwathatyathwa ngamagosa ayenokukhululeka, asebenze ngokukhawuleza, abe ne-solubility ephezulu yeoli, ayegxininiswe ngakumbi kwaye anikezela kakhulu amandla okwelapha. Ngamafutshane, i-Testosterone i-acetate powder "iya kusebenza" njengeyiphi na isicatshulwa se testosterone kuba inika i testosterone. Kodwa zonke kuzo, akunqwenelekayo ngaphandle kokuba ufuna isenzo sokukhawuleza kunye nesicatshulwa esicasulayo ngesizathu esithile.
I-acetate yinto ester encinci engasetyenziselwa ukwenza i-testosterone inject. Xa sele iqhotyoshelwe, le khowudi encinci ye-carboxylic acid iyakucasula kakhulu kwiifomesi kwisayithi ye-injection-ibuhlungu kakhulu kwezinye iimeko. I-acetate ester iyancipha ukukhutshwa kwe testosterone kuphela. I-pharmacokinetics yayo ayilona nto ibhetele ngakumbi kunokuba ukunyuswa kwe testosterone ngokuthe ngqo, oku kwenzeka nokuba kunzima kubantu abaninzi.
Uninzi lwabantu aluqapheli ngamanyathelo athatyathwe ukuba ahlanganiswe nonyango olungenayo inyoyiko engenakho nangokobisi kunye neesinyithi. Amahomoni amaninzi amnyama athengisa i-steroid i-hormone ivivinywe zichanekile kwaye ifunyenwe ukuba i-under-dosed okanye ayinayo nayiphi na imveliso yonyango. Iimakethe ezimnyama ezinokusetyenziswa ngamachiza ngokuqhelekileyo azenziwanga phantsi kwemimiselo yekhemistri kwaye ziyakwazi ukungena kumanyathelo afunekayo ukuqinisekisa ukukhuseleka kwesigulane. Oogqirha kwi-Medical Supply baphando kwanoma yiyiphi na ikhemisi esetyenziselwa ukumisela i-hormone engenayo kunye nezondlo. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba iiprotokthi ezithile zilandelwa kwaye igalelo ngalinye lonyango elivelisiweyo lihlolwe ngokuzimeleyo ukuze liqinisekise ubungqina, ubumpofu, nokungabikho kwee-endo-toxins. Ukuba unquma ukusebenzisa umthombo wesitrato se-testosterone ukuphucula umsizi, ubuncinane ufundise uzenzele ukuqinisekisa ukuba ukwandisa inzuzo kunye nokunciphisa iziphumo zecala. Kukho ulwazi oluninzi lokudideka nolunxaxhayo malunga ne testosterone kunye ne-testosterone ezingenakwenzeka kwi-intanethi. Kwakhona, abanye abantu bacinga ukuba i-dose ephakamileyo iphakamileyo. Abanye bayakuhoxisa ingozi yokuvala umkhiqizo wabo okanye abazi indlela yokulawula iziphumo ezimbi.
Ukungasebenzisi i-dose efanelekileyo: Amadoda aqala ukuhlola i-testosterone kufuneka ukuba amanqanaba abo egazi e-testosterone avunywe emva kweeveki ezimbini okanye enye inyanga emva kokuba baqale unyango (kuxhomekeke kwindlela yokwenziwa kwe-testosterone), ngaphambi kokuba baqhube umthamo ohambelana naloo mini okanye iveki. Oku kubaluleke kakhulu kuba ezi ziphumo zibalulekile ekunqumeni ukuba idosi lilungele wena.
III. I-Raw Testosterone i-acetate powder HNMR
Indlela yokuthenga i-Testosterone i-acetate powder (i-CAS 1045-69-8) esuka kwi-AASraw
I-AAS Raw inikezela ubungcwele 99% I-Testosterone i-acetate ipowder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iilabhu zangaphantsi zokusetyenziswa kwegciwane.
I-Testosterone i-Acetate I-Raw Powder Recipes
I-testosterone i-acetate powder: nceda ungayisebenzisi ukuba ungazazi ezi zinto!
ikaliwe 2.00 ngaphandle 5
I-Nandrolone Decanoate (DECA) ipowder
Tamoxifen Citrate (Nolvadex) powder